सांसद बनेपछी किन रोकियो कोमल वलीको बिहे ?(भिडियो ) – rastriyakhabar.com
सांसद बनेपछी किन रोकियो कोमल वलीको बिहे ?(भिडियो )
काठमाडौं। गायिकाबाट परिचय बढाउँदै माननिय बनेकी कोमल वली हरेकजसो बर्षको तिजको छेकोमा चर्चामा रहन्छिन् । कोमलले तीजमा गाउने गीत अनि उनले मर्काएको कम्मरले चौतर्फी चर्चा पाउँछ । यो पटक पनि कोमल वली चर्चित गायक पशुपति शर्मासँग जोडी बाँध्दै तीज गीत ल्याउने तयारीमा छिन् ।
तर यो पटक उनले बिहे र प्रेमको कुरा छोडेर देशभक्ति तीज गीत ल्याउँदै गरेको उनको गीतको भिडियो छायांकन स्थलमा पुग्दा खुल्यो । जहाँ उनले घुस दिनेलाई भोट नदिन गीत मार्फत जनतालाई सचेत गराउँदै थिइन् । गीतको भिडियो सुटिङ भइरहेको सेटमा बिहेको कुरा गर्दा कोमलले सांसद बनेपछि जवाफ नै परिमार्जित गरिन् । कोमल वलीसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुहोस :